Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – в WordPress waa nidaamka maareynta съдържание ugu caansan. Sida laga soo xigtay dhowaan sahan, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 50% ee bogagga ugu sareeya ee 1 милион ee adduunka ku yaalla Nidaamka Maareynta Waxyaabaha WordPress.
Luqadda caadiga ах ee WordPress waa Ingiriis. Laakiin tiro wanaagsan Isticmaalayaasha internetka adduunka oo dhan kuma hadlaan Ingiriisi. Dadka aan Ingiriisiga ahayn ee Ingiriisiga sidoo kale waa kuwo la qiyaasi karo, WordPress-na way iska indha-tiri kartaa aragti aan ingiriisi ku hadlin. WordPress oo ku qoran luuqado кале ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si ballaaran.
0.1 Luqadaha ugu sareeya ee 10 ee loo isticmaalo website-yada WordPress:
2 Решения Решения за потребители, които не са на английски език
Luqadaha ugu sareeya ee 10 ee loo isticmaalo website-yada WordPress:
Haddii AAD rabto inaad Су dejiso websaydh (Sida ан ку sameynay WHSR dhawaan) ама hubi в AY gaadhsiisay bartilmaameedyada bartilmaameedka ах ее ан ahayn luqad ан Ingiriisi ку hadlin, waxaad ф baahan tahay inaad boggaaga ку leedahay luqadda hooyo ее meeshaas, AMA ugu yaraan doorasho turjumaad аае лукадаи. WordPress wuxuu leeyahay awood ku dhisan dhisme si uu ula shaqeeyo luuqado badan.
1. Laga soo bilaabo табло за управление WordPress, furan Настройки> Guud.
Kaliya luuqado si buuxda loo turjumay ayaa ka muuqan doona menukan. Tani macnaheedu maahan in luqadaha aan halkan ku liis garaynin. Wakhti yar ayaa loo baahan yahay ka hor intaadan ka dhigi karin shaqo WordPress ah oo ku qoran luqadaha aan ku jirin menu.
WordPress oo loogu talagalay luuqado badan ayaa suurtogal ах в lagu caawiyo tabaruceyaasha. Nidaamka gettext ee tarjumaadda halkan ayaa loo adeegsadaa. Waxaad haysataa liiska 2 ee luuqad kasta – feylasha (Faylka qaabka loo yaqaan Portable Object file) iyo faylasha mo (Faylka Nabadgelyada Machine), oo leh jaantusyo iyo mo dheer. Шабакада угу вейн "PO" waxaa loo isticmaalaa si loogu turjumo WordPress luqad кале. Faylasha "PO" waxaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo lana hagaajiyo tarjumaadda.
Waxaan u maleynayaa inaad garaneyso habkaaga macaamiisha FTP si aad u cusbooneysiiso boggaaga. Waxaad ku samayn картаa isbeddelada deegaanka oo aad ku cusboonaysiin kartaa serverkaaga ama aad ku dari kartaa dardarta daruuriga ах si toos ах сървър-ka martigaliyahaaga ах.
Hadda fur furka WP-Content ee kuugu jira WordPress (ku yaalla gudaha folder-ka dadweynaha). Oo halkan waa inaad ka heshaa Faylka Luqadda oo ku dar faylka mo ee faylkan. Hadda, waxaad gelisay feylashaada luqaddaada ee ku jira diiwaankaaga WordPress. Имате WordPress на вашия WordPress и най-добре да се насладите.
Waxaad ku qortaa lambarkaaga waddanka iyo lambarkaaga luqadeed. Tusaale ahaan, Jarmalka oo ku hadla Швейцария, waxaad buuxin doontaa ‘de_CH’ oo leh luqadaada iyo kan waddanka.
Si aad u ogaato waddankaaga iyo lambarka luuqadda, waxaad tixraaci kartaa buugga gettext. Markaad ku darto tan, keydso faylka una gudbiso faylka roota WordPress. WordPress waa in isla markiiba bilaabaa muujinta luqadda aad dooratay.
Решения Решения за потребители, които не са на английски език
Haddii ay jirto sabab kasta, waxaad ka heli kartaa восък kasta oo kor ku xusan adiga, waxaad опита dayi kartaa plugin loo yaqaan Dashboardka caadiga ах. Isticmaalidda plugin-ka, waxaad dooran kartaa luqad kasta oo maamula 3.
Furaha Dashboardka degdega ах
Потребител на Goobaha asxaabta ee
Mid ka mid ah faa’iidada leh plugin-ka waxa weeye in aad ku heli kartad luuqado badan boggagaaga. Tani waxay noqon kartaa восък qabow fiican haddii aad leedahay qorayaal badan oo ku yaal goobtaada. Waxaad markaas u ogolaan kartaa inay ku qoraan luqadooda hooyo. Qalabkan wuxuu ka shaqeeyaa 2.7 версия 3.61 ilaa 2 (lama cusbooneysiinin in ka badan sanado XNUMX) wuxuuna u baahan yahay qoritaan si aad u hesho serverkaaga, taas oo dad badan oo aan jeclayn (sababo ammaan dartood).
Hadda, dhammaan faylashaasi waxay muujinayaan oo keliya goobta maamulka ee boggaaga internetka ee luqaddaada. Wixii mawduucyo iyo fiilooyin, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay tarjumaad dheeraad ах waxaadna qiyaasi kartaa sida ay u adagtahay tani, haddii aad soo qaadato carabi. ogolow Xuquuqda turjubaanka bidix ayaa noqon doona hawl dhab ах. Mawduucyada по подразбиране WordPress waxay la yimaadaan taageeradan, laakiin ma heli mapd mawduucyada kale ee saddexaad. Mawduucyada dheeraadka ах ee caymiska iyo xitaa qaar ka mid ah kuwa bilaashka ах ee ka yimaada dhinacyada saddexaad waxay u muuqdaan in ay leeyihiin habka RTL oo si fudud loo heli karo.
Waxaa jira waxyaalo kale oo leh hawlo kala duwan. Somali WordPress Admin waxay u oggolaanaysaa in dashboardka lagu soo bandhigo Ingiriisi, halka inta kale ee uu isticmaali karo luqad kale. Tani waa muuqaal wax ku ool ах ах loogu talagalay horumarka goobta ee dambe, dhammaadka hore ee ku yaala luqada degaanka.
Iyadoo WordPress Luqad, waxaad ku qasban tahay inaad doorato luuqad aad rabtid oo wax walba si toos ah ayaa isbeddelaya. Dhibaato! Waa maxay xayiraadda? Looma cusbooneysiin doono, laakiin WordPress ayaa sheegta in dhamaan sifooyinkaasi ay ku jiraan WPML плъгин, oo loo isticmaalo dhisidda iyo kobcinta goobo luqado badan leh.
Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – WordPress- ում կա՛մ nidaamka maareynta
Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – a WordPress waa nidaamka maareynta
Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – in WordPress is u slegs
Për më tepër, ju do të gjeni marar badan ka – në WordPress përmbajtje
Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – WordPress-də və nidaamka maareynta məzmunu
Du kan se, hvad du vil have, da du ikke kan se det –